निष्ठूरी भूकम्प – मझेरी डट कम
निर्दोषी ती नयन उघारेर शरदले भर्खरै मात्र आफ्नो घुम्टो भित्रैबाट अलिअलि र्समाएझैं गरी पुलुक्क चिहाएर हेर्न लागिरहेकी मात्र छे । ऊ पनि आफ्नी दिदी वसन्तभन्दा कहाँ कम छे र ? सोह्र श्रृङ्गारले झकिझकाउँछे । अनेक वास्नादार अत्तरहरू छर्किएर बिरालोको चालमा हिँड्ने षोडषी युवतीझैं मसक्क मस्किँदै वर्षारानीले धोइपोती गरेको सुन्दर यस धर्तिमा मालिकनिझैं ढलीमली गर्दै देखापरेकी छे । मगमगाउँदी सुकसुकाउँदी मोहनीरुपधारी शरद आफ्नो माधुर्य वर्षाएर जगतका प्राणीहरूलाई कृष्ण भगवानले आफ्नो बाँसुरीको धुनले सारा प्राणीलाई लठ्ठ पारेझैं लठ्याउन आतूर छे । मानौं यो शरदको रुपरङ्ग देखेर सारा जगत मन्त्रमुग्ध बनोस् । मेघराजा पनि आफ्नी रानी वर्षालाई लिएर कसैले नदेख्ने ठाउँमा आनन्दमा डुबिरहेका होलान् । आकाश स्निग्ध छ । मानौं ऊ पनि चुपचाप साथ षोडषी शरदको लज्जा मिश्रति मधुर मुस्कानमा एकोहोरिएको छ । वास्नादार शरदको सुगन्धले हावा पनि गमक्क परेको छ ।
मेरो मन भने संज्ञा शून्य भएर पर देखिएको विजुलीको तारमा केन्द्रित छ । त्यहाँ लस्करै लागेर बसेका परेवाका जोडिहरू देखेर म रमाइरहेकि थिएँ । परेवाका जोडीको प्रेममयी क्रियाकलाप देखेर म निक्कैवेर उनीहरूको खुशीमै डुबिरहेकी थिएँ । तर त्यो खुशी केही क्षणको लागि मात्र सीमित हुन पुग्यो । जब विना सङ्केतनै आकाशबाट मुशलधारे पानी पर्यो । ती परेवाका जोडीहरू आ-आफ्नो गन्तव्य स्थानतर्फलागिसकेका छन् । बिचरा उनीहरूले पनि बेलुकीको खानाको कुनै शरधाम जुटाउन पाएका थिएनन् होला । पानी रोक्ने कुनै छाँटकाँटनै थिएन तर घैलाबाट घोप्टाएझैं गरेर पानी पर्यो लगभग आधा घण्टासम्म ।
बल्ल पानी रोकियो कति मान्छेहरू कामको थकान सँगै लिएर हतारहतार बाटो लागिरहेका थिए भने कति त घरमा पुगेर आराम लिइसकेका थिए । स्कूल , कलेज पढेर र्फकने बिद्यार्थीहरू पनि आ-आफ्नो घर पुगिसकेका थिए होलान् । आफ्ना परिवारका सदस्यहरू ड्युटी सकेर घरमा पुगी खुशी साटासाट गर्दै थिए होलान् । त्यो खुशी मेरो केही क्षणमै गर्ल्याम्म भत्कियो । जब एक्कासी मान्छेहरूको चिच्याहट शुरु भयो लौन भुइँचालो आयो …………. भन्दै मान्छे एक्कासी कराएको आवाज सुनेँ । मान्छेहरूको कोकोहोलो सुन्नुभन्दा अगाडि मैले आफूलाई रिङ्गटा लागेको पो हो कि जस्तो भने महसूस गरेकी थिएँ । हो रैछ घर मच्चिन थाल्यो भन्दै म पनि सुरक्षित स्थलतिर भागौं भन्दै कराउन थालेँ तर गगनचुम्बी महलहरूले आफूलाईनै खबरदारी गरेझैं औंलो ठड्याइरहेको जस्तो देख्न थाले । काँपीरहेको मुटुलाई दह्रो बनाउँदै म फेरि बाहिर निस्कन खोज्छु । साँघुरो गल्लीमा दुबैतिर ठडि्इएका पर्खालले आफूलाई ङीच्च दाँत देखाएर मेरो डराइरहेको अनुहारलाई जिस्काइरहेको महसूस भयो । हे भगवान ! कस्तो अप्ठ्यारोमा पुर्याइदिनुभयो । अब कसरी जोगिने ? म मेरो काखेबच्चालाई च्यापेर भगवानको नाम जप्नु सिवाय केहि उपाय देख्दिन । घर अझै पिङझैं मच्चिरहेको छ । मानव निर्मित संरचनाहरूनै मानवको निम्ति काल बन्न लागेको महसूस गरिरहेँ । केही क्षणमै सब स्वाहा हुनुपर्ने बेला आउन लागेको संझेर झनै म आत्तिनै रहेँ । उफ ! भन्दै म मृत्युलाई नजिकैबाट छामिरहेकी थिएँ ।
धन्न पृथ्वीमाताले आफ्नो कम्पनलाई केही क्षणमै रोकिन् । सारा प्राणीहरूले नयाँ जिन्दगीको शुरुवात गरेको महसूस गरे होलान् । लामो सास तान्दै भगवानलाई धन्यवाद दिए । यसपटकलाई त बाँच्न सफल भइयो । बाँच्न त बाँचियो तर आफन्तहरूलाई कहीँकतै अनिष्ट पर्यो कि भनेर मेरो मन अझै ठीक ठाउँमा आउन सकेको थिएन । दुइघण्टा सम्म सञ्चारको माध्यम ठप्प भयो । कतै फोन लागेन ।
बाहिर तिरको चिच्याहट त रोकिइसकेको थियो तर मेरो मन भने अनेक भ्रमात्मक सोचाइमा दौडिरहेको थियो । केहीक्षण अघिको भुइँचालोको गडगडाहटभन्दा पनि डरलाग्दो कम्पन मेरो शरीरभरी फैलिएको थियो । आफन्तको वियोगको समाचार सुन्नुपर्ने पो होकि भनेर झनै मन आत्तिरहेको थियो ।
२ घण्टा पछि बल्ल फोन लाग्यो सबैतिर । धन्य कुनै मानवीय क्षति हुन पाएनछ । दिमाग अलि ठण्डा भएर आयो । बेलुकीको खाना बनाउन भान्छामा पसेँ । बेलाबेलामा त्यही अघिकै भूकम्पले हल्लाइरहन्थ्यो । भूकम्पले दिएको धक्काको भ्रम दिमागबाट अझै हट्न सकेको थिएन । आत्मविश्वासको त्यान्द्रो अझै दरिलो हुन सकेको थिएन ।
भूइँचालोको सुनामी छालहरूलाई दिमागबाट पञ्छाउने प्रयत्न गर्दै म टिभीमा कार्यक्रमहरू हैर्दै थिएँ । समाचार दिने समय भएछ । समाचार शुरु भयो । देशका विभिन्न ठाउँमा भूकम्पले गरेको मानवीय क्षतिको विवरण भन्न शुरु भयो । पूर्वी नेपालको पहाडी क्षेत्रमा निकै ठूलो क्षति भएछ । धेरैले घर भत्किएर घाइते हुनुपरेछ भने कतिले त ज्यानै गुमाउनु पनि परेछ । समाचार सुन्दासुन्दै मैले मेरै गाउँको एकजना धनेदाइ पनि परेको सुनेँ । मलाई समाचारकौ विश्वास लागेन अरुनै कोही होलाकि जस्तो पनि लाग्यो तर पटकपटकको समाचारले मलाई धने दाइको मृत्युलाई विश्वास गराउन बाध्य बनायो । मैले त्यो दाइलाई बच्चा बैलादेखिनै राम्ररी चिनेको थिएँ । मलाई उसको परिवारको पृष्ठभूमिको वारेमा राम्रो थाहा थियो । नाता त केही पर्दैनथ्यो तर पनि उसको मलाई आफ्नै दाइ जत्तिकै माया लाग्थ्यो । बिचरो दाइलाई विधाताले ठगेकै रहेछ । सानैमा बाबुआमा गुमायो । अभिभावक गुमाएपछि पढ्न पनि पाएन । बहिनीहरू हुर्काउने अभिभारा उसकै काँधमा आइपर्यो । हातमुख जोर्नलाईनै धौधौ पथ्र्यो ऊ एउटैको बनिबुतो गरेको कमाइले । उसका बाबुआमाले दुःख गरेर छोराछोरीलाई जसोतसो पढाउँदै थिए । उसको बाबुलाई एक्कासी एपेन्टीसाइटिस बढेर आएछ उपचार गर्ने पैसाको अभावमा बाबु वित्यो । उसको बाबुलाई एपैन्टीसाइटिसको अप्रेसन गर्ने पैसा जुटेन । आमालाई उसको बाबुको बिछोडको पीडाले लग्यो । उसकी आमाले मानसिक सन्तुलन गुमाएर आत्महत्या गरी ।
आमाबाबु बिनाका टुहुरा बहिनीहरूलाई जसोतसो हुर्काएर ७-८ कक्षासम्म पढाउँदै ज्वाइँलाई जिम्मा लगाएर विवाह गर्ने उमेर पुगेपछि आफूपनि बिहा गरेर गाउँमै बसेको थियो । सधैंको गरिबी देखेर वाक्क बनेको धनेदाइ श्रीमती सहित घरवारी बेचेर जम्मा गरेको अलिकति पैसा लिएर काठमाण्डौमा डेरा गरेर बसेको १० वर्षभएको थियो । २ वर्षघि म माइत जाँदा धनेदाइले पनि काठमाण्डौंमा कमाइ गरेर जम्मा गरेको पैसाले गाउँमा बचेको जमिन फेरि किन्यो भनेको सुनेकी थिएँ । २ जना छोराछोरीलाई निजी स्कूलमा राखेर पढाउँदै छ रे भनेको सुन्दा मलाई उसको छोराछोरीले भने राम्रैसँग पढ्न पाएछन् भनेर खुशी लागेको थियो । उसले आफूले पढ्न नपाए पनि छोराछोरीको भविष्यको लागि काठमाण्डौंमा केही वर्ष बस्ने भन्ने कुरा पनि गरेको रहेछ ।
म पोहोर साल दशैंमा माइत जाँदा धने दाइकी श्रीमती पनि अर्कैसँग पोइल गइछ भनेको सुनेकी थिएँ । आफू छोराछोरी पढाउँदै एक कारखानामा काम गरेर बसेको धनेदाइको भूकम्पले घर भत्काएर ज्यान लिएछ । बिचरो कति अभागी रहेछ धनेदाइ ! उसका ती लालावाला भने ट्युशन पढ्न गएको भएर बाँचेछन् । ती अबोध बच्चाहरूको के हविगत हुने भो ! छोराछोरीका लागि खाना तयार गर्दा गर्दै छाना खसेर पुरेछ धनेदाइलाई । ती बाँसका तामा जस्ता कलिला बच्चाको के दोष थियो र उनीहरूको खुशीमाथि बज्रपात हुनुपरेको होला । दैवी प्रकोप पनि कत्ति ननिको हुँदो रहेछ । आमाले छोडेर अर्कैसँग बाटो तताए पनि आमाको माया दिएर धनेदाइले अर्की बिहे नगरी बसेको थियो । उसको सारा खुशी भनेकोनै ती दुइजना छोराछोरी थिए । तिनीहरूलाई राम्रोसँग हुर्काएर पढाउने अठोटका साथ आफ्नो शरीर कारखानामा मेशिनझैं घोटिरहेको धनेदाइको मृत्युको खबरले मेरो घाँटी अठ्याएर आयो । मलाई उसका ती बच्चाहरूको भविष्य देखेर सास रोकिएलाझैं भएर आयो । सारा शरीर पहाडले किचेको महसूस भयो । शरीर पूरै बरफझैं भयो ।
हाय बिधाता ! किन यसरी तिम्रो लाठी गरीब दुःखीमाथि मात्र बज्रिन्छ । के यो दुनियाँमा गरीब दुःखी असहायले आफ्नो सपना पूरा गर्न पाउनु पर्दैन ? किन उनीहरूको खुशीमाथि कुठाराघात गर्छौ ? तिम्रो मन किन दुःखीहरूप्रति पग्लँदैन ? अग्नि परीक्षानै लिनुछ भने त्यो धनेदाइ जस्ताको प्राणनै लिएर ती अवोध बच्चाहरूलाई टुहुरा बनाई सधैं आमाबाबुको बिछोडको पीडामा किन तड्पाउँछौ ? अग्नि परीक्षा लिनुछ भने पनि यसरी अवोध बच्चालाई बेसाहारा नबनाऊ ।
उफ ! बिधिको बिधान ! दुःखीलाई मात्र पीडा बर्साउने कस्तो निष्ठूरी तिमी ? म थचक्क भुइँमा पछारिन पुगेछु । मेरो शरीरनै मेरो लागि पर्वतझैं गह्रौं भएर आयो । आँखा धमिलिएर तुवाँलोले ढाक्यो । गला अबरुद्ध भयो । म आकाशतिर हेरेर केही क्षण एकोहोरिरहेँ । आँखा बन्द गरेँ । मेरा अश्रुसरीताले भरिएका आँखा परको क्षितिजमा गएर अडिरहे अडिरहे ।
3 thoughts on “निष्ठूरी भूकम्प”
Biju Subedi September 26, 2011 at 3:14 am
ठूला-ठूला घटनाहरु हुँदा यस्ले साहित्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको
ठूला-ठूला घटनाहरु हुँदा यस्ले साहित्यलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको हुन्छ । यो हालैको प्राकृतिक प्रकोप भूकम्पको प्रभावबाट सिर्जित कथा हो । कथाकारले यसमा सफलताकासाथ वस्तुस्थितिलाई उतारेर उजागर गर्न सफल भएको छ । कथाकारको लेखन कार्यमा प्रगति हुँदै जाओस् । कथाकारको कलम निरन्तर चलिरहोस् । कथाकारलाई मुरी -मुरी शुभ-कामना ! …………..बिजु सुवेदी “विजय”…………….
Tika Kharel Subedi October 1, 2011 at 3:44 am
katha padhnu hunesabaima dherai dherai dhanyawad! sathai comment garnu vaekoma biju ji lai aavar byakta garna chan6u.
Tika Kharel Subedi October 1, 2011 at 3:58 am
katha padhnu hunesabaima dherai dherai dhanyawad! sathai comment garnu vaekoma biju ji lai aavar byakta garna chan6u..